ဟိုးအဝေးကြီးက တရုတ်ပြည် (မြင့်သန်း) | လမ်းအိုလေး
July 26, 2013 by lanolay	2 Comments
(A Slow Boat To China by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
Mandalay Icon Magazine – ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၃။)
2 thoughts on “ဟိုးအဝေးကြီးက တရုတ်ပြည် (မြင့်သန်း)”
ညီ မင်း ဝေ
စာလုံးတွေ အရမ်းသေးနေတယ်ဗျ ။ ဖတ်လို့ မရဘူးဗျ။ ဘယ်လို ဖတ်ရင် အဆင်ပြေမလဲ ကူညီပါဦးဗျ။
အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ View full size icon လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် အိုကေပါတယ်။
Thumbnail တစ်ခုချင်းစီကို right-click နှိပ်ပြီး Open New Tab နဲ့ ဆိုလဲ ရပါတယ်။ ပြီးမှ လိုသလို Ctrl +/- လုပ်ယူပေါ့ဆရာ။